Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Ganacsiga oo la kulmay Dhiggiisa dalkaTurkiga”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Ganacsiga oo la kulmay Dhiggiisa dalkaTurkiga”SAWIRRO”
Wafdi uu hoggaaminayo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la kulmay Dhiggiisa dalka Turkiga.
Mudane Cabdullaahi Xayir Ducaale Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha aya la kulmay Agsssimaha Wasaaradda Warshadaha Science iyo Technology dalka Turkiga iyagoo ka wada hadlay sidii uu iskaashi Ganacsi u dhexmari lahaa labada Wasaaradood.
Agaasimaha ayaa si doo kale la kulmay dhammaan Shirkadaha dalka Turkiga kuwaas oo doonaya inay ka faa’iidaystaan fursadaha maalgashiga ee Yaalla Soomaaliya.
Agaasimaha guud ee Wasaarada Ganacsiga iyo Warshadaha ee DFS ayaa si wayn usoo Dhaweeyay dhamaan shirkadaha ka soo qayb galay kulanka iyo sida ay uga go,an tahay inay Soomaaliya maalgashi dhankasta leh ku sameystaan.
Agaasimaha Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Mudane Cabdullaahi Xayir Ducaale ayaa balan qaaday in ay shirdaha dalka Turkiga ala shaqayn doonan sidii ay maalgashi ugu samaysan lahaayeen Fursadaha yaalla Soomaaliya, isagoona tilmaamay in ay fulin doonaan codsiyada Shirkadahaas ay soo gudbiyeen ee ku Aadan dhanka maalgashiga.
Agaasimaha ayaa la kulmay ku-xigeenka Xoghayaha Guud ee Rugta Midowga Ganacsiga dalka Turkiga Tobb, iyagoo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirkalabada Rug iyo inla Tababaro Shaqaalaha Rugta Ganacsiga, iyo samaynta Guddi ganacsi oo labada dal ah.
Safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga ayaa ka Mas’uul ah Howlaha Baaxadda leh ee dhanka Maalgashiga ku saabsan ee Dowladda Turkiga ay doonayso inay ka samayso dalka.
Ugu dambaytii Danjiraha Safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga ayaa Dadaal Ugu jira Sidii loo Xoojin lahaa Xiriirka Ganacsiga iyo midka Siyaasadeed ee ka dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Turkiga kuna guulaystay howllo badan intii uu shaqada hayay Mudane Cabdullaahi Maxamed Cali “Sanbaloolshe”
Wasiir Maareeye “Guul ayay noogu soo dhamaatay socdaalkii Kuwait” SAWIRRO